उपत्यकामा संक्रमित भेटिएपछि कोरोना परीक्षण गराउने बढे !
काठमाडौं – उपत्यकामा कोभिड-१९ स‌ंक्रमण देखिन थालेपछि नमुना परीक्षण गराउने बढेका छन् । उपत्यकामा मङ्गलबार दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि विदेशबाट आएकाहरु आफैँ अस्पतालमा पुगी नमुना परीक्षण गराउन थालेका छन् । उपत्यकामा अहिलेसम्म पाँच जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मङ्गबारसम्म रियल टाइम पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन (पीसीआर) र र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरी दुवै विधिबाट अहिलेसम्म १२ हजार नौ सय छ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि अहिले उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु अस्पताल र वीर अस्पतालमा पनि पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको छ । इपिडिमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले उपत्यकामा पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विदेशबाट आएका व्यक्तिको परीक्षण गरिरहेको बताए ।